Webinar: COVID-19 iyo Tafaariiq - Istaraatijiyadaha Waxqabad ee Lagu Kordhin karo Suuqgeynta Suuqgeynta Suuqgeynta | Martech Zone
Shaki kuma jiro in warshadaha tafaariiqda ay burburiyeen aafada COVID-19. Maaddaama aad tahay macaamiil Suuqgeeyaha Cloud, in kastoo, waxaad leedahay fursado aysan tartamayaashaadu haysan. Cudurka faafa wuxuu dardar galiyay korsashada dhijitaalka ah iyo dabeecadahaas ayaa sii wadi doona inay koraan inta dhaqaaluhu soo kabanayo. Webinarkaan, waxaan ku soo bandhigi doonaa 3 tabo ballaadhan iyo 12 dadaal oo gaar ah oo ku wajahan guud ahaan ururkaaga waa inuu mudnaanta siiyaa maanta - si aan looga badbaadin dhibaatadan oo keliya laakiin loo kobciyo sannadka soo socda.
Iyadoo Salesforce iyo Suuqgeynta Suuqgeynta noocyo ballaadhan oo casri ah oo ka kooban dhufto iyo qalab, macaamiishoodu waxay leeyihiin karti aad u wanaagsan oo ay kaga hor tagi karaan duufaankan dhaqaale. Highbridge khabiirka isbeddelka dijitaalka (iyo Martech ZoneAasaasihii) Douglas Karr ayaa kaa caawin doona inaad bislaato suuq-geyntaada dijitaalka ah oo aad u beddesho isticmaalka shirkaddaada daruuraha suuqgeynta si aad ugu korodho helitaanka, u dhisto qiimaha macaamiisha, iyo inaad u sii haysato macaamiisha qiimaha leh.
In webinar this, waxaan ku siin doonaa 12 xeelado gaar ah oo kaa caawin doona inaad yareyso kharashka aad ku iibsato iyo beddelaad, loo kordhiyo dakhligaaga hawlgal kasta, iyo in la wanaajiyo guud ahaan dadaalka suuq-geynta digital. Webinar wehelina, waxaan ka qaybgalayaasha siin doonnaa liis hubineed oo la socda iyo kheyraad si aan kuugu soo qaadno jidka.
Data - dadaallada lagu doonayo in lagu nadiifiyo, lagu soo koobo, laysku waafajiyo laguna kobciyo xogtaada gudaha Suuqgeynta Suuqgeynta si loo yareeyo qashinka loona kordhiyo waxtarka.
Delivery - dadaallada loogu talagalay naqshadeynta iyo gaarsiinta farriimaha sanduuqa, ka fogaanshaha shaandhooyinka qashinka ah iyo aqoonsiga arrimaha ISP gaar ah.
Shakhsi ahaan - dadaallada lagu kala saarayo rajadaada iyo macaamiishaada, kala shaandheynta iyo bartilmaameedka ololeyaashaada, iyo is-gaarsiinta isgaarsiinta.
imtixaanka - dadaallada lagu cabbirayo, lagu tijaabinayo, laguna hagaajinayo isgaarsiinta suuqgeynta badan ee kanaalka.
Sirdoonka - Fahmaan sida Einstein uga caawiyo dukaamada inay ogaadaan, saadaaliyaan, ku taliyaan, oo ay otomatig ka noqdaan isgaarsiintooda suuq geynta
Highbridge waxaa u harsan dhowr kursi oo ka baxsan macaamiishooda - marka haddii aad xiiseyneyso, fadlan isla markiiba isdiiwaangeli:
Suuqleyda danaynaysa inay fahmaan sida Suuqgeynta Suuqgeynta ay dakhliga ugu soo kordhin karto tafaariiqdaada ama ururkaaga ganacsiga.
Suuqgeeyayaasha hirgeliyey Suuqgeynta Suuqgeynta laakiin waxay jeclaan lahaayeen inay noqdaan kuwo aad u xeel dheer qaybtooda, shaqsiyadaynta, iyo is-hagaajinta.
Suuqleyda hirgeliyey Suuqgeynta Suuqgeynta laakiin waxay jeclaan lahaayeen in lagu daro safarada macaamiisha casriga ah iyo tijaabinta dadaalkooda.
Suuqleyda hirgeliyey safarada macaamiisha oo aan jeclaan lahaa in lagu dabaqo sirdoonka macmalka ah si loo hagaajiyo safaradaas.
Kooxda hoggaanka at Highbridge waxay leeyihiin in kabadan 40 sano oo wada jir ah hogaaminta istiraatiijiyadeed ee fulinta tafaariiqda tafaariiqda. Macaamiishooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah Dell, Chase Paymentech, iyo GoDaddy… laakiin waxay ka caawiyeen boqolaal ururro inay dhisaan khariidado si dijitaal ah ururadooda loogu beddelo. Dibedda, waxay ka caawiyaan shirkadaha inay beddelaan waayo-aragnimada macaamiisha. Gudaha, waxay ka caawiyaan shirkadaha inay otomatig ka dhigaan, dhexgalaan, ayna hagaajiyaan barnaamijyadooda si ay u abuuraan aragti dhab ah, 360-degree oo ah macaamiishooda.
Showpad: Mawduuca Iibinta, Tababbarka, Ka-qaybgalka iibsadaha iyo Cabbiraad
Ku dhiirrigeli Podcast-kaaga iTunes-ka adigoo adeegsanaya Banner App Smart ah